Uthando | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
kutheni xa ndivuyayo ndihamba kakuhle?
Kutheni ndihamba kakhulu xa ndonwabile? Ngenxa yokuba indalo ikwenzile oko, ewe, ukuba uyaphuma, oko kuthetha ukuba ufuna isondo. Ukugqibela kuya kubuza oku ...
phezulu xnumx anime uthando
I-10 ephezulu ye-anime ngothando lwamanga olubi, eyona nto iphambili ziifilimu zikaMakoto Shinkai, kunjalo! "5 cm ngomzuzwana" yeyona idumileyo. Kodwa ndiyayithanda "Ilizwi nge ...
Ungakujonga njani ukuba umfana ulala okanye cha?
Ujonga njani ukuba umntu uyaxoka okanye cha? Ukuvavanya umfana, jonga imbonakalo yobuso bakhe, izijekulo, indlela ahamba ngayo kunye neentshukumo zakhe. Indlela yokuchonga iimpawu zobuxoki. Umyalelo Inqanaba lobunzima: Akukho lula inyathelo elinye Iimpawu zangaphandle zezona ...
indlela yokunciphisa umzimba ngokuzilolonga ngokukhawuleza?
ukunciphisa umzimba ngokukhawuleza, umthambo? Ndivumelana nezinto ezininzi, kodwa njengokutya, yitya YONKE into, ngexesha lomsebenzi, iikhalori zitshisiwe, kodwa ungazityi))))))) Ngaba uyafuna ukunciphisa umzimba ngokukhawuleza? Oku kunokwenzeka ukuba, ukongeza kwisondlo esifanelekileyo, uzibandakanya emzimbeni ...
Bhala imibongo enhle kakhulu ngokuthandana nobomi
Bhala eyona mibongo imnandi ngothando nobomi uthando luthando njalo njalo .. usithanda njani isingqisho? =) Ndiyazi ukuba ndikuthanda njani. Ndiyakwazi ukuphefumla. Ndinga…
Apha, bathi - ukuba uphupha umntu, ke yena ucinga ngawe .. uthini? Iingcinga zenzeka?
Apha, bathi - ukuba uphupha umntu, ke yena ucinga ngawe .. uthini? Iingcinga zenzeka? Ucinga ngaye, hayi ngawe ... Ngelishwa ... Mhlawumbi ...
Yimiphi imithandazo yothandwa?
yeyiphi imithandazo ekhoyo yomntu omthandayo? UThixo uphumle umphefumlo wakhe! Bawo, xa ndithandaza ndibhekisa kuwe. Gcina kwaye ulondoloze intliziyo yakho, Zikhusele kumona nakubuxoki, E ...
Yintoni efunekayo ukuze ulonwabo ngumfazi oqhelekileyo?
Yintoni umfazi oqhelekileyo ofuna ukonwaba? Ngamnye wethu ufuna into ekhethekileyo yolonwabo, kodwa uninzi lwethu lusapho olunobuhlobo, apho umyeni okhathalayo nozinikeleyo kunye neengelosi abantwana.
Upela njani e-Ukraine Ndingathanda?
Indlela yokupela ngokuchanekileyo kwiUkraine NDINITHANDA? Kuvakala kukuhle ngakumbi: ndingu kohayu wakho !!! okanye ndingu kokhayu kuwe! I tebe cohayu 🙂 I cohayu you Ukrainian "Ndiyakuthanda" ...
bhala isincoko "ngothando lomntu"
bhala isincoko ngesihloko esithi "uthando kubomi bomntu" Uthando ebomini bomntu lolunye lweemvakalelo ezibaluleke kakhulu umntu ahlangabezana nazo ... Ukususela ekuzalweni .. sithanda umama, utata, izalamane ... emva koko siyakhula ...
Uncedo !!! Udinga ukunconywa ezininzi kwintombazana, amazwi amnandi, iinqwenela, ezinokuthi !!! Bhala wonke umntu !!!
Nceda!!! Sifuna ukuncoma intombazana, amagama amnandi, kwaye yintoni enqwenelekayo! Bhala nganye nganye !!! mhle, ulumkile, uyakhathala, ulungile, uyathandeka, uyathandeka, uyathandeka, uyingqayizivele, awunakulinganiswa nanto, awunakulibaleka, awunakuphikiswa, u-chic, uyakhazimla, uyathandeka, ...
Uhlobo lwegazi kunye nolwalamano
ezaposwa ngomhla 28.04.2018
Ingqangi yokudlala ngothando. Ukutsala ngokukhawuleza kunye nogxa wakho. Ukuthandana okungazibopheleli ngaselwandle. Uthando lufana nephupha. Isiqwenga ngasinye sinamaqhawe aso. Kwaye kuyenzeka ukuba kwimeko nganye si ...
ezaposwa ngomhla 26.04.2018
Yonke iminyaka iyathobela uthando - le yinyani! Nangona kunjalo, kwiminyaka eyahlukeneyo oku kwenzekayo ngokungalingani ... Masizame ukufumana ulungelelwaniso? Kubonakala ngathi kuthi umnqweno wokulala ngesondo uchazwa luthando, ukuthanda okanye, kwi ...
i-pacifist ngubani lo?
pacifist ngubani lo? Lowo ugweba naziphi na iimfazwe kwaye umele ukuphela kwazo kunye nokuthintela I-pacifist ngumntu ofuna ukudala uxolo emhlabeni ugqiba yonke into ngendlela yoXOLO.
Uyakuqonda njani ukuba indoda inomona?
Ukuqonda njani ukuba umntu unomona? Uba mbi kakhulu kwaye wenza yonke into ngokuchasene noko. Ndingavuya kuba ebengenamona. Eyam yeyomona kakhulu. Tshekisha iminxeba, iminxeba ngokuhlwa ujonga apho ...
yintoni enye ongayibhalela ngayo?
yintoni enye onokumfowunela ngayo u-Anya ??? Anyuta ... Annushka, Anyuta, Anechka, Nyusha, Nyusechka, Nyurochka, Annette, Anna light…. ummangaliso ..., ubabalo lukaThixo (yile ndlela liguqulelwa ngayo ukusuka kwezinye iziHebhere), Nyurok, Nusik ... nje ...
Nguwuphi amazwi amahle ongatsho kumfana?
ngawaphi amagama amnandi onokuwathetha kumfana? Umhle kakhulu, ulumkile, uyimfihlakalo ... Ngamanye amaxesha ndicinga - kutheni sihlangene ... kwaye ndiyaqonda ... Usisiqingatha sam, nesiqingatha + nesiqingatha = inye, ...
Indlela yokuwa ngothando nomfazi weCapricorn?
Indlela ukuthandana umfazi Capricorn? nguwuphi umahluko owenzayo kwiCapricorn okanye intlanzi?)) Wonke umntu wasetyhini ufuna indlela yakhe ekhethekileyo))) enze isicwangciso kwaye aqhubeke)))) ukhetho A aluphumelelanga (((hayi ukhetho B luya kunceda))) impumelelo)))) ...
Musa ukumnika intombazana
Intombazana ayimniki Mnike isitulo somthi entlokweni yakhe - uya kuyinika kwangoko. Uhambe kakuhle ntombazana. Unentlahla. Khathalela f.Umfazi ozinzileyo akafuneki ngaphambili. Ukuba uthanda ukuba nomonde, ayibalulekanga le ...
Ukuvavanya njani iimvakalelo zomntu? funda ngaphakathi.
Uzijonga njani iimvakalelo zendoda? funda ngaphakathi. Zama ukumcela ukuba akuncede. Ewe, apho, nekhompyuter okanye ingxaki yefowuni. Mmemele ekhaya. ... Ukuba uthetha ngokusondeleyo, uya kuqonda ... ukuba ...
Imibuzo ye-78 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,793.